अन्नपूर्ण बुधवार, मंसिर २९, २०७३ 2047 पटक पढिएको
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताद्वारा निर्वाचित निकायको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ, सरकारलाई जनमुखी र जवाफदेही बनाउनमा । नेपालमा निर्वाचित सर्वोच्च निकायका रूपमा स्थापित संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी कति पूरा गरेको छ/छैन, त्यसबारे सायदै सांसदहरूले आत्मसमीक्षा गरेका होलान् । तर अहिले संसद् के कुनै दलविशेष या सर्वोच्च आसनमा बस्ने सभामुखको निजी संस्था बनेको त हैन ? आक्रोश र गुनासा व्यापक रूपमा सुनिन थालेका छन् बाहिर । ती आक्रोश या आधार छन्, यद्यपि यो विकृति ओनसरी घर्ती सभामुख भएपछि मात्र देखा परेका छैनन् । विकृति चुलिएको अवश्य हो, उनले पदभार सम्हालेपछि ।
सदन सञ्चालनका निश्चित नियमावली, प्रक्रिया र परम्परा हुन्छन् । असहज परिस्थितिमा विवेक र सहमतिद्वारा निर्देशित भई सदन सञ्चालनको वातावरण निर्माण गरिन्छ । संसद् जनताको प्रतिनिधिहरूको थलो भएकाले सदनको कारबाही गरिमापूर्ण र मर्यादित तरिकाले होस्, जनता र मुलुकका समस्या त्यहाँ उठाइयून् अनि सरकारका गतिविधिबारे जनताले संसद्मार्फत थाहा पाइरहून् भन्ने स्वाभाविक आकांक्षा हुन्छ, आम जनतामा ।
तर ०६३ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइएयता त्यो प्रतिनिधि सभा अनि संसद्को भूमिकासमेत निर्वाह गरेका दुईवटा संविधानसभा अनि वर्तमान संसद् सबैले जनतालाई निराश तुल्याएका छन् । सदन सञ्चालनमा नियमभन्दा संख्याको दादागिरी र प्रशासनमा बस्ने व्यक्तिको 'स्वेच्छा' या 'तजविजी' अधिकारले निर्णायक भूमिका खेलेका छन् । संसद्माथि व्यक्ति हाबी हुन जाँदा त्यो संसद्ले सान्दर्भिकता गुमाउन सक्छ र जनताको नजरमा ऊ जनविरोधी संस्थाकै रूपमा चित्रित हुन जान्छ ।
संसद्को छविमा दूरगामी असर पार्ने र सभाध्यक्षको नियतमा प्रश्न उठाउन मिल्ने एउटा मात्र उदाहरण पर्याप्त छ । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको महाभियोग जुन रूपमा आयो र जसरी उनलाई रातारात निलम्बन गरियो, त्यसपछि बहस किन अगाडि बढाइएन ? त्यो विषय त्यति महत्त्वपूर्ण थियो भने दुई महिनासम्म किन बीचबीचमा एकदुईजना सांसदलाई बोल्न दिएर प्रक्रिया लम्बाइन्छ ? के उनको निलम्बन षड्यन्त्रको पाटो त थिएन ?
त्योसँगै जोडिएको अर्को एउटा पक्ष छ । हरेकचोटि सभामुख राजधानी या मुलुक बाहिर जाँदा सदन 'बन्द' गर्ने परिपाटी बनेको छ, यता आएर । सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुख र उनको पनि अनुपस्थितिमा 'पीठाधीश अधिकारी' हरूको टोली बनाइएको छ । तर आफू बाहिर जाँदैमा संसद्मा ताला लगाउनु संसद्प्रतिको अपमान हो, उपसभामुख, पीठाधीश अधिकारीहरूको टोली संसदीय नियम, प्रक्रिया र परम्पराप्रतिको अपमान हो ।
बहुमत या सत्ता गठबन्धकै दलहरूसँग परामर्श लिएर पनि यस्तो क्रियाकलाप देखाउने छुट सभामुखलाई हुँदैन । यसले खतरनाक कुपरम्पराको निर्माण गर्ने अर्थात् संसद् निजी संस्था बन्ने खतरा बढ्ने हुँदा तत्काल सभामुखले अब उप्रान्त आफ्नो अनुपस्थितिमा पनि सदन चल्न दिने चलन पुनः प्रारम्भ गर्नु जरुरी छ ।
सोमवार, साउन ३०, २०७४ कोसीको कहर
आइतवार, साउन २९, २०७४ उद्धारमै केन्द्रित होऔं
शुक्रवार, साउन २७, २०७४ न्यायप्रणालीमा फड्को
सप्तरीमा नदी नियन्त्रणको लगानी बालुवामा पानी 595
ट्रम्प प्रशासनद्वारा दक्षिण एशियामा पहिलो पटक नेपालका लागि ५० करोड डलर स्वीकृत 9210
किन बनाउन सकेन नेपालले भारत नीति ? 2466